Erdogan iyo madaxweynaha Giriigga oo is maandhaafay | Hangool News
December 8, 2017 - Written by Hangool News 1
Booqashadii u horraysay ee madaxweyne Turki ah uu ku tago Giriigga muddo 65 sano ah ayaa u billaabatay si kulul ka dib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhiggiisii martigalinayay ay is waydaardeen erayo aan lala kala gabanin.
Erdogan ayaa sheegay in uusan caddaalad u dhicin heshiiskii 1923 lagu jeexay xadka Turkiga markii uu dhammaaday dagaalkii koobaad ee adduunka.
Laakiin madaxweynaha Giriigga Prokopis Pavlopoulos ayaa diiday in wax isbadal ah lagu sameeyo heshiiskii Lausanne.
Maxaa xasaasiyadda keenaya?
Image captionInkastoo ay xiisad jirto haddana dadka arrimahan ka faallooda waxay sheegayaan in Erdogan uu xiriir wanaagsan la leeyahay Tsipras
Siday u socotaa booqashadani?
Hadallada ay is waydaarsadeen labada masuul ayaa dhacay maalintii u horraysay ee booqashada labada maalmood ah ee madaxweynaha Turkigu uu ku joogo Giriigga ka dib markii ay si wada jir ah u qabteen shir jaraa’id.
Erdogan ayaa sheegay in sida loola dhaqmayo Muslimiinta Giriigga ay muujinayso in Athens ay ku guuldaraysanayso in ay raacdo heshiiskii horay loo galay.
“Taakulayntii aasaasiga ahayd ee ay u baahnaayeen lama siinin marka ay timaaddo maalgashiga waxaana jira faquuq,” ayuu yiri Erdogan, isagoo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in la caddeeyo qoddobo ka mid ah heshiiska.
Madaxweynaha Giriigga Pavlopoulos oo ka mid ah khuburada ugu cadcad ee dhanka sharciga ee dalkiisa oo arrintaas ka jawaabaya ayaa sheegay “in heshiiskan uusan iyaga u ahayn mid laga wada xaajoon karo, uusan lahaynna wax ka dhiman, sidaas daraadeeddna uusan u baahnayn in dib loo eego ama wax lagu daro, sidaasna uu ku jirayo heshiiskaasi.
Intaas ka dibna ra’iisulwasaare Alexis Tsipras ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen in ay billaabaan “tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida labada dal”. Wuxuuna sheegay in ay muhiim u tahay in labadooduba ay si degan uga hadlaan aragtiyada kala duwan ee ay qabaan.
Isagoo uu weheliyo Erdogan ayuu intaas ku daray: “Waxaan u baahannahay in aan qaab wax hagaajinaya u soo bandhigno fikirkii aan qabno iyo wixii aan isku haynaba, iyadoo aan laga badbadinaynin ama aysan hanjabaad ku jirin lana ixtiraamayo aragtida middaas ka duwan ee dhinaca kale qabo.
Booqashadan ayuu madaxweyne Erdogan ku tilmaamay mid “taariikhi ah” waxayna dhacaysaa iyadoo hawlgallo ammaan oo baaxad leh ay socdaan.
Labada dawladoodba waxay rajaynayaan in booqashadan ay bog cusub u furi doonto xiriir labo geesood ah oo ay yeeshaan, waxayna si wada jir ah u sixiixeen kaabeyaal dhaqaale oo ay si wada jir ah u fulinayaan, sida uu ku soo warramayo weriyaha BBC-da Mark Lowen oo ku sugan magaalada Athens.